असुरक्षाका कारण नर्सहरु सेवाबाट पछि हटे के होला? :: ममता दुलाल :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
असुरक्षाका कारण नर्सहरु सेवाबाट पछि हटे के होला?
ममता दुलाल बिहीबार, जेठ २०, २०७८, २०:०९:००
कोरोना महामारीको कठिन परिस्थितिमा पनि स्वास्थ्यकर्मीहरु आफ्नो कर्तव्य नबिर्सी बिरामीहरुको सेवामा अहोरात्र खटिरहेका छन्। स्वास्थ्यकर्मीहरुमध्ये पनि अग्रस्थानमा छन, नर्स। कोरोना सङ्क्रमणको पहिलो लहरबाट छुटकारा नपाउदै नेपाल दोस्रो लहरसँग लडिरहेको छ। कोरोना सङ्क्रमणको पहिलो लहरमा नर्सहरुले एउटा स्वास्थ्यकर्मी हुनुको भूमिका पुर्ण रुपमा निभाएको हामीले प्रत्यक्ष रुपमा देख्न पायौं र उनीहरुको भूमिका अनुकरणीय रहेको छ।
कोरोनाको दोस्रो लहरसगै हजरौं मानिसहरु दिन प्रतिदिन सङ्क्रमित भइरहेका छन्। साथै कैयौँ मानिसहरुले ज्यान गुमाइरहेका छन्। यस्तो सङ्कटको घडिमा पनि आफ्नो ज्यान जोखिममा राखि बिरामीको ज्यान बचाउन स्वास्थ्यकर्मीहरु दिन रात खटिरहेका छन्। भोक, तिर्खा अनि निन्द्रा नभनी आफ्नो कर्तव्य निभाइरहेका छन्। कैयौँ नर्सहरु अफ्नो परिवारबाट टाढिएर सेवा प्रदान गरिरहेका छन् भने कैयौँ नर्सहरु बिरामीलाइ सेवा प्रदान गर्ने क्रममा आफैं कोरोना सङ्क्रमणको सिकार बन्न पुगेका छन्। सारा मानिसहरु आफ्नो घरमा बसी रहेको समयमा नर्सहरु आफ्नो परिवारलाई पनि सङ्क्रमणको जोखिममा पारेर निस्वार्थ भावना लिइ आफ्नो उतरदायित्व पुरा गरिरहेका छन्।
कैयौँ मुलुकमा कोरोनाको महामारीसँग लडिरहेका नर्सहरुको मनोबल उच्च राख्नका लागी जनता लगायत विभिन्न संघ संस्थाहरुले समेत सक्दो हौसला प्रदान गरिरहेको कुरा सामाजिक सन्जालमार्फत हामीले देख्दै आइरहेका छौं। अर्कोतिर हाम्रो देशमा भने नर्सहरुले सामाजिक बहिष्कार सहनु परेको छ। साथै कैयौँ नर्सहरुलाई आफू बसेको घरबाट घरधनीले निकाला समेत गरिएको समाचार कुनै नौलो होइन। यति मात्र नभइ यस्तो विषम परिस्थितिमा समेत आफ्नो जीवनलाई हत्केलामा राखी सेवा प्रदान गरिरहेका नर्सहरुमाथी शारिरीक आक्रमणका घटनाहरु भइरहेका छ्न्। हालसालै भेरी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक र नर्समाथी भएको आक्रमणको घटना त हामी सबै माझ अवगत नै छ। कोरोना सङ्क्रमित बिरामीको उपचारको क्रममा निधन भएको घटनालाई लिएर बिरामीका आफन्तहरुले उपचारमा खटिएका नर्सिङ स्टाफमाथि हातपात गरेका थिए र आफ्नो ज्यान जोगाउनका लागि नर्सहरु अस्पतालको झ्यालबाट हाम फालेर भाग्नु परेको थियो।
एकतिर कोरोनाको आक्रमण त छदैछ अर्कोतिर मानिसहरुको अमानवीय व्यावहारले नर्सहरुको हौसला र मनोबलमा असर पुराइरहेको छ। हामी यस्ता घटनाहरु पहिला देखि सुन्दै आएका छौं र भविष्यमा फेरि पनि यस्ता घटनाहरु नदोहोरिएलान् भन्न सकिन्न।
एकातिर स्वास्थ्यकर्मी विदेश पलायन हुने क्रम बढ्दो छ भने अर्कोतिर आफ्नै देशमा केहि गर्छु भन्ने स्वस्थ्यकर्मिहरुले पनि दश पटक सोच्नु पर्ने वातावरण सिर्जना भइ रहेको छ। यति मात्र नभइ हाम्रो समाजले यस्तो वातवरण सिर्जना गरिरहेको छ कि अब पछि गएर स्वास्थ्यकर्मी बन्छु भन्ने भन्दा पनि स्वास्थ्यकर्मी बन्दिन भन्ने नयाँ पुस्ताको सङ्ख्या पो बढि भेटिने हो कि।
के स्वास्थ्यकर्मीहरुले सधैं कुटाइ नै खानुपर्ने हो? के स्वास्थ्यकर्मीहरु माथी हातपात गर्नु नै समस्याको समाधान हो? तपाईंहरु नै एकपटक सोच्नुस त यदि नर्सहरुले पनि आफ्नो मानवता बिर्सिए के होला? १२ घन्टा सम्म पिपिइ लगाएर बिरामीको सेवामा खटिएका नर्सहरु नै पछि हटे के होला?
अरुको जीवन बचाउन लागी परेका नर्सहरु आज आफ्नै जीवन रक्षाका लागि सहयोग माग्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ। आफ्नो व्यक्तिगत तथा पारिवारिक समस्याहरुलाई एकातिर पन्छाएर आफ्नो जीवन जोखिममा राखी बिरामीको सेवामा अहोरात्र खटिरहेका नर्सहरुको मनोबल उच्च राख्न हौसला प्रदान गर्नुका साथै उनीहरुका लागी सुरक्षित वातावरण सिर्जना गर्नु अपरिहार्य छ।
-(दुलाल बिएस्सी नर्सिङ चौथो वर्षमा अध्ययनरत छिन्)